LibreOffice 5.4.3 yakaburitswa neanopfuura makumi mashanu mabugs abviswa | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Zvirongwa, Free Software
Iyo nharaunda inoenderera ichivandudza iyo inoshamisa LibreOffice hofisi suite. Iye zvino vane lAngle LibreOffice 5.4.3, kuvandudzwa kutsva kwakaitwa mune ino gadziriso yekuvandudza mushure me5.4.2 yakaonekwa masvondo mashanu apfuura uye zvakare iri rebazi iri 5. Iyo yemahara uye yakavhurika sosi suite inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu, sezvaunonyatso ziva, kwete chete yeGNU / Linux. Mukuburitswa kutsva uku, ivo vanogadzira vanga vachinyanya kushanda mukuvandudza nekugadzirisa mamwe matambudziko aripo mushanduro dzakapfuura, pane kuyedza kuwedzera mashandiro matsva.
MuRibreOffice 5.4.2 vhezheni, akawanda madhigi uye zviputi zvakawanikwa izvo zvakagadziriswa nekuburitswa uku. Kunyanya anopfuura makumi mashanu bugs abviswa. Kunyanya, kana tikatarisa iyo changelog tinoona kuti makumi mashanu neshoma akagadziriswa mukuburitswa uku uye kuti akakanganisa akati wandei ezvikamu zveiyi suite. Uye zvakare, vamwe vevagadziri vayo vakasiyawo zvirevo munhau zvichiratidza kuti vhezheni 52 ichauya pakati paZvita wegore rino.
Tichamirira kuti tione izvo vhezheni itsva yatichengetera uye ndinovimba inouya pamwe nekumwe kuvandudzwa. Parizvino isu tinogona kuisa iyo FreeOffice 5.4.3 vhezheni isu tichakamirira inotevera kuburitswa. Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kufunga kuti zvimwe zviviri zvaburitswa zvichatevera iyi, LibreOffice 5.4.5 uye 5.4.6 inotarisirwa muna Kukadzi naMay 2018 zvichiteerana. Rangarira kuti izvi zvigadziriso zvekuchengetedza zvebazi 5.4 zvicharamba zvichiburitswa kusvika Chikumi 2018, panguva iyoyo pavanorega kutarisa pamatavi matsva ebudiriro.
Kana iwe uchifarira, unogona ikozvino kurodha pasi kubva kune akasiyana mawebhusaiti, kunyangwe ini ndichigara ndichikurudzira kurasa zvirongwa kubva pawebhusaiti yepamutemo yeprojekti kana musimudziri, nekuti haisi chete yakachengeteka, asi isu zvakare tine huwandu hweruzivo nezve kuburitswa, manyore , zvinyorwa zvepamhepo, nezvimwe. Nenzira, Iyo Gwaro Sisekelo inorongawo kushanda nesimba ku FreeOffice 6.0 muna Ndira 2018...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » LibreOffice 5.4.3 yakaburitswa neanopfuura makumi mashanu mabugs abviswa
Ini ndinosimudzira sei kubva pane yapfuura vhezheni?
Sun Visuetti akadaro
Kubva vhezheni 5.4. Kubva ikozvino zvichienda mberi hazvigoneke kuverenga zvinyorwa zvakachengetwa paCD, sezvo zvaigona kuitwa mushanduro dzakapfuura. Gwaro rinogona kutevedzwa uye kuvhurwa kana riri pane rakaomarara diski, asi harigone kuvhurwa richiri paCD. Zvingave here kuti ivo vari kufunga kubvisa iyo cdrom, sezvo diskette yakabviswa? Zvese zvimwe zvakanaka, asi ndinofanira kuvhura windows kuti ndiverenge zvandakachengeta mu cd.
Pindura Sol Visuetti
Yakakomba Sam 3 VR: BFE yakaburitswa yeLinux